Ihe mkpofu - ebe a na-ekpofu ahịhịa n'okporo ámá, ihe nkwụsị, ebe a na-adọba ụgbọala
Mkpo ahịhịa, nke a na-ahụ n'okporo ụzọ, na nkwụsị, n'ime ogige obodo, ebe egwuregwu, na sandbox, na ubi obodo na n'ámá, mgbe ụfọdụ ka a na-akpọ dị ka ite ahịhịa n'okporo ámá, ụzọ mbadamba obodo, ebe a na-ete obodo ma ọ bụ ihe mkpofu obodo.
Ewezuga oche oche ogige, ha bụ ihe ndị a na-ahụkarị Obere ụlọ ime obodo. Ahọputara nke oma, obughi na agwado ya na gburugburu ya, kama ha nwere ike ibu agwa ya, njiri mara nke na-emeputa gburugburu.
Ngwongwo ikpo ahihia bu ihe eji achọ mma
Mkpọ ahịhịa na mpụga okporo ụzọ dị n'èzí bụ ihe na-apụta ìhè na mbara igwe n'ọzọ ọ bụla. Eleghi anya ọ bara uru iji ha iji nye ohere ahụ pụrụ iche ma jikọta ọnụ?
Anyị nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na palette na-acha uhie uhie na aka anyị. Nke a jikọtara ya na ọdịdị na ịchọ mma dị mma, nwere ike ibute nchịkọta nke mkpofu ahihia n'ime oghere obodo a haziri ahazi. A nwekwara ike iji usoro nke abụọ, ọ dịkwa iche. Ihe a na-awụba n'oké osimiri n’onwe ya pụrụ ịpụ iche site n’inye okporo ụzọ anyị, ogige anyị na ogige anyị ihe ga-eme ka ha gbapụ.
Enwere ike ịchekwa bọket obodo dịka ụkpụrụ ụlọ ndị gbara ya gburugburu ma ọ bụ jiri ya rụọ ihe ndị ọzọ gbasara ụkpụrụ ụlọ obodo, dịka ogige oche, oche kwụ ọtọ, bọọdụ ozi na nkwụsị ụgbọ njem ọha.
Mgbe ahụ ha ga-mejupụta akụkụ ọzọ nke njikọ chiri anya, na iche echiche nke ọma. Ma na usoro nke okike, ụdị na agba.
Na uzo ozo, ulo oku anyi na aputa ihe iche. Ha nwere ike buru udi nke anumanu ma obu ihe omuma, na-akuko akuko banyere akụkọ ntolite, akụkọ mgbe ochie, akụkọ ifo ma ọ bụ naanị aha ebe. Colorscha ha nwere ike iche na gburugburu ha. Nweta uche, ma cheta gị dị ka ihe pụrụ iche, gbanwere akụkụ mbụ.
Ofdị nke ụdị brọd
A na-ekekarị ihe mkpuchi okporo ụzọ n'okporo ámá dịka: ihe esi eme ha, ihe ga - ekwe omume ịkpa ókè, nhọrọ ngwa ndị ọzọ. Mkpọ ahịhịa ndị a dị n'èzí dị iche na ebe mkpofu ahiri ụlọ anyị nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa dị ka Ikea, Castorama ma ọ bụ Leroy Merlin. Ha aghaghi idi ndu karie, iguzogide onodu ubochi, corrosion, mbibi, ma dikwa nfe.
Ihe dị mfe ma dịkarịsịrị na-etekarị ahịhịa bụ obere bins. Ha nwere ike nwee mkpuchi, akwa, mkpuchi iji gbochie mkpochapụ, ma ọ bụ ihe owuwu. Ka osi di, ihe mkpofu ahihia obodo nwekwara ike inwe ngwa ndi ozo, dika asha. Enwere ike itinye bọket na bench ma ọ bụ jiri ngwa ogige ndị ọzọ.
Nkata okporo ụzọ nwere ike inwe otu ụlọ ma ọ bụ karịa. Otutu ulo gbara otutu kwenyere mkpochapu ahihia na igbagharị.
Achịcha ahịhịa nwere ike ịdị arọ, nke a na-etinye na ala. Ibu ha na –eme ka nnukwute idi ike ghara imebi ihe. Ha na-adigide ma na-eje ozi ruo ọtụtụ afọ.
Mkpọsa okporo ụzọ na-abụkwa ìhè, ihe eji arụ ọrụ nke igwe, nke a na-eyikarị n’elu osisi etinyere n’ala. Mpempe akwụkwọ ndị a na-awụba ahịhịa dị ọnụ ala ma ọ bụ ọbụna dị ọnụ ala. Ọnụahịa ahụ dabere na ọnụahịa nke ihe eji ekpofu ahịhịa. Enwere ike iji usoro ikpochasị dị mfe dochie ihe ntụtụ a. Ihe a na-achọ mma ha anaghị abụ nke kachasị elu, yabụ, a na-eji nkata ndị a chọọ mma, dịka ọmụmaatụ ejiri bọọdụ chọọ mma ndị a.
ikea mkpo ahihiamkpofu ahihiaihe eji eme ulo ahihiaihe mkpofu maka ịkpa okeikea ahịhịana-enweta ihe mkpo ahịhịaenwere mmetụta na-adịghị mma na mmiri adịghị mmaImegharị ihe mkpofu ahịhịaihe ndozi ulo ahiaihe eji ekpofu ahihiaMpụga ụlọ ndị dị n'èzíájá ụrọMkpọkpọ obodona-adọba mkpọmkpọ ebe